ပေါက်ကွဲ Mentos သောက်
Fizzy Mentos သောက်
တစ်ဦးကမိတ်ဆွေတစ်သင်တစ်ဦးရေခဲတုံးသို့ Mentos သကြားလုံးအေးခဲခြင်းနှင့်ကာဗွန်သောက်ထဲမှာနေရာချထားတဲ့အတွက်ဘယ်လိုမှ "ဒီမန်ဟက်တန်စီမံကိန်း" ဟုခေါ် Project ငါ့ကိုက Wired မှ link တစ်ခုစေလွှတ်ခဲ့သည်။ ရေခဲတုံးအရည်ပျော်သောအခါ, သကြားလုံးပတျဝနျးကငျြဖယောင်းထိတွေ့ပါလိမ့်မည်နှင့်သွန်းလောင်းမီးတောင်ပေါက်ကွဲမှုသငျ့သညျ။ ဒါကြောင့်အလုပ်မလုပ်ပါသလား? ရှာကြစို့။
ပေါက်ကွဲ Mentos ပါဝင်ပစ္စည်းများသောက်
အဆိုပါဝီစကီကိုခေါ်မူရင်းစာရွက်ထဲမှာသောက်စရာ, ချိုမြိန် vermouth နှင့်ခါးသီးမှု (အခြေခံအားဖြင့်တစ်ဦးမန်ဟက်တန်ပေါင်းအစားအသောက်များတွင် cola), ဒါပေမယ့်သင်ကရမ်နဲ့ Coke စေနိုင်သည်သို့မဟုတ်သင်ကြိုက်နှစ်သက်သမျှသို့မဟုတ်ရုံနှစျခုပါဝင်ပစ္စည်းများသုံးပြီး non-အရက်ဗားရှင်းကြိုးစားကြ:
တစ်ဦး Mentos ™သကြားလုံး
ငါလက်ျာဘက်မျက်နှာစာတက်သင်ပြောပြလိမ့်မယ်: ဆော်ဒါနှင့် Mentos အတူသောက် ပေါက်ကွဲမည်မဟုတ် ဒါကြောင့်တစ်ဦးပူးတွဲကွန်တိန်နာထဲမှာတည်သည်မဟုတ်လျှင်။ ပေါက်ကွဲအချိုရည်ရှုပ်ထွေးအောင်ပေါင်းသူတို့ဖန်၏ shards ထွက်ကိုလေပေါ်မှာပလေ့, ဒါကြောင့်ဒီသောက်စရာဒါအကြမ်းဖက်မဟုတ်ပါဘူးကောင်းတစ်ဦးအရာပါပဲ။ '' ပေါက်ကွဲ '' သင်ဒီမှာရှာနေပိုပြီးအရာဖြစ်တယ်။
သင်တစ်ဦးမျှော်လင့်မထားတဲ့မီးတောင်ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပေါ်စေလိုပါကရေခဲတုံးဗန်း၏ကောင်းစွာသို့တစ်ခုတည်း Mentos သကြားလုံးအေးခဲ။ သင်သည်အထိစောင့်ဆိုင်းလျှင်သင်ကအကောင်းဆုံးရလဒ်တွေကိုရလိမ့်မယ် ရေခဲလုနီးပါးအေးခဲဖြစ်ပါတယ် , ပြီးတော့သူကရေခဲရဲ့မျက်နှာပြင်အနီးင်ဒါကြောင့်တစ်ဦးချင်းစီတုံးတစ် Mentos သကြားလုံးထည့်ပါ။ သငျသညျရေအေးထဲမှာသကြားလုံးစုပ်ယူထားရန်မလိုချင်ကြဘူးသို့မဟုတ်ယင်း၏အပေါ်ယံပိုင်းပျော်ပါလိမ့်မယ်။ ထိုသို့ဖွစျလြှငျ, သင်အစားအသောက်များတွင် cola အတူကရောထွေးလာသောအခါရလိမ့်မယ်အားလုံးသကြားလုံး-အနံ့ cola ဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါရဝုဏ်ဟာ Mentos ရေခဲတုံးညျပျြောအဖြစ်ထိတွေ့ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်ဆိုတာပါပဲ။ အဆိုပါသကြားလုံး၏ဖယောင်းအပေါ်ယံပိုင်းအစားအသောက်များတွင်ဆိုဒါနှင့်အတူဓာတ်ပြုပြီးသောအခါ, သောက်စရာ fizz နှင့်ဂန္တူသောပူဖောင်းလိမ့်မယ် Mentos နှင့်အစားအသောက်ဆိုဒါစမ်းရေတွင်း၌ ။
သငျသညျရှယျခကျြ-ပေါ်တွင်သို့မဟုတ်အခြားစီမံကိန်းလုပ်နေလုပ်နေပါလျှင်သူတစ်ဦးဦးရဲ့ကာဗွန်နိတ်သောက်စရာသို့ Mentos ကျဆင်းနေဖမ်းမိတဲ့စိတ်ထဲမထားပါဘူး, သင်ရိုးရှင်းစွာဆိုဒါထဲမှာသကြားလုံး plop နိုင်သည် - လိုအပ်မပါရေခဲတုံး။
ရေခဲပြင် Cube အလုပ်ဖြစ်အတွက်ဘယ်လို Mentos
တစ်ဦး Mentos သကြားလုံးကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ဓာတ်ငွေ့ပူဖောင်းကိုပိုမိုလွယ်ကူစွာထချဲ့ထွင်ရန်ခွင့်ပြု, အဆိုဒါ၏မျက်နှာပြင်တင်းမာမှုကိုလျော့နည်းစေတယ်လေအခြားအရာများအနက်, အစေး Arabic အဘိဓါန်အင်္ကျီဖြစ်သည်။
အဆိုပါသကြားလုံးအပေါ်ယံပိုင်းပူဖောင်းနှင့်ရေမြှုပ်ဖွဲ့စည်း, ဓာတ်ငွေ့ဖမ်းယူထားကြတယ်။ ငါသည်ဤစီမံကိန်းကိုကြိုးစားခဲ့သည့်အခါကျွန်မအံ့မခန်းမီးတောင်ပေါက်ကွဲမှုမရခဲ့ပါဘူး, ဒါပေမယ့်သင့်သောက်စရာဘို့ကျဉ်းဖန်ကိုသုံးပါလျှင်သင်အတန်ငယ်ပိုကောင်းရလဒ်တွေကိုမျှော်လင့်ထားနိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါ Mentos အရသာသွန်းလောင်းကြောင်း မှလွဲ. ကျွန်မ Mentos နဲ့ဧည်ရေခဲတုံးနှင့်အတူတစ်ယောက်ယောက်ကိုအများကြီးဖြစ်ပျက်သတိထားမိသို့မဟုတ် Out-of-ထိန်းချုပ်မှုမြှုတ်သောက်ရာမှခံရလိမ့်မည်ဟုမထင်ကြဘူး။ အဆိုပါစီမံကိန်းကိုနေဆဲတော်တော်ပျော်စရာပါပဲ။
စားသုံးနိုင်သောအတု Barf Make လုပ်နည်း
တစ်ဦးကို Safe Glow ချော်ရည်မီးအိမ် Make ရန်ကဘယ်လို
တစ်ဦးအမြီးနဲ့မော်ဒယ်ကြယ်တံခွန် Make ရန်ကဘယ်လို
လျင်မြန်စွာ Crystal တစ်ခါသုံးဆေးထိုးအပ်တစ်ဖလားတိုးတက်ကြီးပွားစေရန်ဘယ်လို
ရော့ခ် Candy Make လုပ်နည်း
Clement Clarke Moore က, အပုဒ်ကို Mythmaker
နောက်ကျောကျောင်း: High School တွင်သင်၏အငယ်တန်းတစ်နှစ်တာမျှော်လင့်ဖို့ဘာ
လူမျိုးနေ့များအတွက်အကောင်းဆုံး SOCKS ရှာဖွေခြင်း
Unsolved လူသတ်မှုနက်နဲသောအရာ: အဆိုပါ Galapagos Affair
Hygroscopic အဓိပ္ပာယ် (ဓာတုဗေဒ)
မျောက်ဝံများအကြောင်း 10 အချက်အလက်
စိန့် Anselm ကောလိပ်အဆင့်လက်ခံရေး
မိန်းရေကြောင်းအကယ်ဒမီအဆင့်လက်ခံရေး GPA, SAT နှင့် ACT ဒေတာများ
အကောင်းဆုံးဟာ Oracle Card ကိုကုန်းပတ်
2017 MCAT စမ်းသပ်ခြင်းနေ့စွဲများနှင့်မှတ်ပုံတင်ခြင်းဇုန်
Xipe Totec - မြေသြဇာနှင့်စိုက်ပျိုးရေး Grisly Aztec ဘုရားသခငျသညျ
Salman Rushdie ရဲ့ "စာတန်အခနျးငယျ": အငြင်းပွားဖွယ်ရာကျမ်းပိုဒ်၏ကောက်နုတ်ချက်
ဂျာမန်စကားတျောပုလ် Feminine, ဒါမှမဟုတ် Nueter လျှင်ပြောပြပါလုပ်နည်း
ထိပ်တန်းမီးသွေးနှင့် pastel စက္ကူ
1992 ခုနှစ်၏ထိပ်တန်း 10 ဦးပေါ့ပ်သီချင်းများ
Frozen စားနပ်ရိက္ခာတစ် Chilling သမိုင်း
သင့်ရဲ့တံခါးအပေါ်လည်ဆွဲချရန်ရိုးရှင်းသောမှော် Herb Bundle ကို Make
Preterit (င) ကြိယာ